पाँच लाखसहित २४ जुवाडे पक्राउ : RajdhaniDaily.com -
Home प्रदेश पाँच लाखसहित २४ जुवाडे पक्राउ
चितवन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले रु पाँच लाख १७ हजार १७५ सहित २४ जना जुवाडे पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई भरतपुर महानगरपालिका–५ कैलाशनगरबाट बुधबार राति पक्राउ गरिएको हो ।
स्थानीय सुनिलकुमार क्षेत्रीको कुखुराको खाली खोरमा कौडा खेलिरहेको सूचनाका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । उनीहरुको साथबाट १६ थान कौडासमेत बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेकाहरुलाई जुवा ऐनअन्तर्गत कारवाही गरिने कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नान्तिराज गुरुङले जानकारी दिए ।
भारतमा ‘कोविड–१९’ संक्रमितको संख्या ३३ हजार नाघ्यो, १ हजार भन्दा बढीको मृत्यु
भारतमा ‘कोविड–१९’ संक्रमितको संख्या ३३ हजार ५० पुगेको बिहीबार जनाइएको छ । योसँगै भारतमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान जानेको संख्या १ हजार ७४ पुगेको स्वास्थ्य...
गाउँघरमा कुहिएर जान्छन्, अचार बनेपछि सबैले खान्छन्
इलाम । गाउँभरि खेर गहिरहेका अमला, लप्सी र मेल बिक्री नभएर कुहिएर खेर गइरहेका छन् । न किन्न कोही पुग्छ न त बिक्री र...
Breaking News Dhruba Lamsal - October 4, 2020 0
कोरोना भाइरस विरुद्ध पहिलो खोप, ९० प्रतिशत काम गर्ने
Editor-Picks Dhruba Lamsal - November 9, 2020 0
एजेन्सी । कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो खोपले ९० प्रतिशत सुरक्षा दिलाउन सक्ने पछिल्लो समय गरिएको नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । खोप निर्माणकर्ता ‘पिफाइजर र बायोएनटेक’...
Breaking News राजधानी संवाददाता - April 10, 2021 0